Home » Utvalda artiklar
09.05.2020 Category: Utvalda artiklar
Ho an’ny mpandainga, ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe leksak ny Google na ny Yahoo satria malalaka sy tsy misy fetrany mihitsy amin’ny fametrahana.
Interserver – $ 5,00 / mo
– $ 0,99 / mo
– manomboka amin’ny $ 0,80 / mo
– manomboka amin’ny $ 3,99 / mo
– manomboka amin’ny $ 2,95 / mo
– manomboka amin’ny $ 2,96 / mo
Alohan’ny hahatongavako ao anaty lalina dia avelao hiresaka momba ny fotokevitra voalohany.
1 Ahoana no anaovana ny fampiantranoana E-post
1.1 Nahoana Ianao no Mila Tari-dàlana E-Business?
2.1 1 – Voafandrika (e-post + webbplats) värd
2.2.1 Webbplats: https://www.namecheap.com Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NameCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia dare tana ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa leksak sehatra anarana ary serivisy fiarovana. Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia $ 0,99 / mo dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra have fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny eldig mailaka ilainao. Webbplats: https://www.hostinger.com Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, alla Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Na inona na inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo. Sampana: Fampiantranoana mailaka an-tserasera sy voatokana. Hafatra fidirana amin’ny alàlan’ny IMAP / POP / Webmail Kaonty mailaka & mandroso tsy voafetra Miaraka amin’ny mpanjifa rehetra Desktop 5. TMD Hosting TMD Shared Hosting (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny $ 2,95 / mo. Mpanenjika ny Email Hosting Services TMD
2.3 6. A2 Hosting
3.2 2- Tsindrio "Skapa" hanombohana
3.3 3- Manaova tsipiriany momba ny kaonty mailaka vaovao
5.1.1 1- Midira ny Zone Editor
5.2.1 1- Mankanesa alla amin’ny DNS-inställningar
5.3 Prover av MX-poster
6.1 Exempel på SPF-poster
6.2.2 2- Midira ny faritra fitantanana maharitra
6.3.1 1- Få åtkomst till DNS-inställningar
Ahoana no anaovana ny fampiantranoana E-post
Na dia izany aza, ao anatin’ny sehatra amin’ity lahatsoratra ity isika dia hihevitra fa mijery ny fampiantranoana ny mailakao ianao. Midika izany fa hifehy tanteraka ny mailakao ianao, amin’ny famoronana adirey sy fametrahana ny fomba hitantanana azy ireo any amin’izay misy azy ireo.
Rehefa alefa aminao ny mailaka dia misy ny antsipiriany isan-karazany ao anatin’izany ny adirey mailaka anao. Miorina amin’ilay adiresy io dia alefa any amin’ny toerana fitahirizana izay alefitra handefasana azy ilay mail. Rehefa tonga eo izy dia afaka manokatra sy hamaky azy amin’ny fotoana voafidinao.
Raha nividy tranokala fampiantranoana web ianao dia matetika dia azo inoana fa ny tranonkala fampiantranoana mailaka dia miditra ao amin’ny tranonkala hosting. Raha tsy manana ianao dia mila mitady mailaka fampiantranoana mailaka ianao mba hampiasa domäner maimaim-poana amin’ny mailakao.
Misy adiresy mailaka manokana leksak izao:
Nahoana Ianao no Mila Tari-dàlana E-Business?
Rehefa mampiasa ny mailaka ara-barotra fampiantranoana izay tena resahiko dia mampiasa domäner maoderina ho an’ny mailakao. Misy antony maromaro ahafahana manao izany manomboka amin’ny fahaiza-manaon’ny professionalism ho an’ny filaminana. Mamolavola fomba fijerin’ny orinasa, ny fandaniana dia tsy mandrara, ary ny tombony dia mavesatra lavitra noho izany.
Ny fampiasana ny sehatra mahazatra dia hamela ny mpanjifanao hahalala tsara hoe iza no ifandraisany. Satria ny faritra dia voatahiry sy notantananao, dia sarotra ho an’ny olona ny mametraka ny tenany ho anisan’ny orinasa.
Företag A – [mailaka voaaro]
Företag B – [mailaka voaaro]
Ny mailaka Företag B kosa anefa dia ho tokana ho anao, tompona tompony. Ny adiresy mailaka ao amin’ny Företag B dia maneho ihany koa ny fahaiza-manaony sy ny fanoloran-tena amin’ny orinasa izay ananan’ny orinasa.
Amin’ny fampiantranoana ny mailaky ny orinasanao manokana, dia mifehy tanteraka ny fomba fitondràna ny mailaka nalefanao. Ohatra, raha toa ianao ka ao amin’ny orinasa iray misy fitipika sasantsasany toy ny toerana, angamba mila mitahiry ny mailaka eo amin’ny serveurs amin’ny toerana manokana.
Ireo orinasa amin’izao fotoana dia mirona amin’ny fifandraisana amin’ny mailaka. Azo inoana fa ny sasany amin’ireo mailaka ireo dia ahitana fampahalalana manan-danja leksak ny faktura, faktiora, femanarahana ary ny leksak izany. Amin’ny fampiasanao ny fampiantranoana mailaka manokana, dia ho tsara kokoa ianao hiatrehana ireo tranga izay hitranga amin’ny olana an-tserasera.
Ny mailaka mycket na simba dia mety hisy fiantraikany lalina eo amin’ny orinasanao ary ny fanohanana izay miaraka amin’ny fandraisam-peo mailaka fandraharahana dia mety hanaporofo fa sarobidy.
Maro amin’ireo toetra izay manana tranonkala tsara Tokony ho ao amin’ny mailaka mailaka tsara ihany koa. Anisan’ireo toetra ireo, ny tendron’ny lisitrao dia tokony ho azo itokisana sy hikolokolo. Ny antony hafa dia:
Amin’ny maha-orinasa azy, ny mpanjifanao dia tokony ho afaka manam-pinoana amin’ny fahamendrehan’ny orinasanao. Manolotra anao fampahalalam-baovao izay tsiambaratelo, leksak ny anarana, adiresy mailaka ary mety amin’ny angona ara-bola mihitsy aza. Ny fiarovana ny mailaka dia zava-dehibe ary tokony hijery ireo fepetra tafiditra ao anatin’izany ny fiarovana ny filaminana, ny anti-malware, ny anti-spam ary ny leksak izany amin’ny mailaka mailaka.
Matetika izahay dia mandinika ny mailaka amin’ny alàlan’ny sehatra samihafa izay mety ho mora adinonay fa mety mitaky fifamatorana samihafa izy ireo tsirairay avy. Rehefa mitady mpamatsy fampiantranoana mailaka, miantoka fa manana ny mailaka, POP ary IMAP ianao.
Webmail dia mamela anao hampiasa mpanjifa mailaka mifototra amin’ny web izay tena mety. IMAP dia mamela anao hamaky ny mailaka avy amin’ny fitaovana rehetra tsy mila maka azy ireo. Ny POP amin’ny ankilany dia mitaky ny maka ny mailaka alohan’ny famakiana azy ireo.
Manana adiresy IP svartlistad dia fomba azo antoka hahitana ny asan’ny orinasa (indrindra fa ny mpanjifa)! Mety ho olana goavana izany satria ny IP anao dia lasa lisitra maintiny dia mitaky fotoana sy ezaka izany mba ahafahana manadio azy indray. Aza avela ho tompon’andraikitra amin’ny mailaka izay manana ny lazany ho an’ny mpanjifanao mahazo lisitra maintimolaly satria mety hiafara amin’ny IP iray ianao ary averina amin’ny lisitra mainty.
1 – Voafandrika (e-post + webbplats) värd
Ny fampiantranoana ny mailaka ifandraisana dia ny fampiantranoana ny mailaka (miaraka amin’ny teny hoe ‘bundled’) ny kaonty webbhotell anao. Miankina amin’ny zavatra ilainao, ity dia afaka manampy anao satria tsy mila mitantana ny mailaka amin’ny kaonty manokana na mandoa fanampiny amin’ny mailaka fampiantranoana.
Na izany aza, voafetra ny habaka fampiantranoana ao amin’ny tranonkalan’ny tranonkala ho an’ny tranokalam-pifaneraserana. Ny ankamaroan’ny buntar dia manolotra sehatra iray samihafa izay zaraina eo amin’ny mailaka sy ny tranonkala. Ankoatra ny habaka, mizara ny habetsahan’ny bandbredd natokana ho an’ny kaontinao ianao.
Ny serivisy fampiantranoana mailaka tsara indrindra? Tsy ny orinasa mpampiantrano tranonkala rehetra no manolotra drafitra manokana ho an’ny mailaka fampiantranoana, fa ohatra amin’ny ohatra ohatra mazava tsara amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka be dia be hita any amin’ny Hostinger ary Web Liquid.
Misy mpandraharaha mpanome tolotra leksak ny Google sy Microsoft izay manana mailaka fampiantranoana vahaolana leksak ny G Suite sy Microsoft 365 Business. Ireo dia tolotra mailaky ny adiresy izay mora ampiasaina sy matanjaka kanefa mila mitantana samirery avy amin’ny fampiantranoana na dia afaka mampiasa ny anaran’ny anaranao aza izy ireo.
Ny tsy fahafantaran’io dia ny mety ho farany amin’ny fividianana ny tsaratsara kokoa raha ny fitomboan’ny mpiasa. Ohatra, G Suite dia mety mitentina $ 5,40 ho an’ny drafitra fototra, fa izany no vidin’ny karaman’ny mpampiasa isam-bolana.
Ny InterServer dia miorina ao New Jersey ary efa ho roapolo taona mahery izao – fiainana maharitra mahatalanjona ho an’ny tranonkala iray. Ny voalohany dia nampidirina ho leksak ny kaonty fananganana virtoaly virtoaly ny androany dia mandrakotra ny habaka rehetra amin’ny tranonkala fampiantranoana tranonkala.
Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NameCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia dare tana ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa leksak sehatra anarana ary serivisy fiarovana.
Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia $ 0,99 / mo dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra have fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny eldig mailaka ilainao.
Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, alla Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Na inona na inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo.
Kaonty mailaka & mandroso tsy voafetra
TMD Shared Hosting (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny $ 2,95 / mo.
Mpanenjika ny Email Hosting Services TMD
SpamExperts mpilalao skräpprofil
Azonao ampidinina ny mailaka ao amin’ny 25 ao amin’ny A2 Lite Plan ($ 2,96 / mo) till ny lahatahiry tsy voafetra ao amin’ny A2 Swift ($ 3,70 / mo) till ny Turbo Hosting ($ 7,03 / mo).
Fa maninona no mampiantrano mailaka miaraka amin’ny A2 Hosting:
Barracuda Advanced Spam Filtration
Alefaso amin’ny adiresy imailaka 25 miaraka amin’ny tetikasa-bunt
Misy Tafika roa lehibe amin’ny fanaraha-maso Ny mpampiantrano fampiantranoana mpanolotra dia manolotra: cPanel, izay linux sy Plesk, izay Windows. Samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana azy ireo tsirairay avy ireo, saingy tsy voatery hisy fiantraikany amin’ny mailaka fampiantranoana anao.
Midira ao amin’ny kaontinao cPanel ary kitiho ny ‘Konton e-post’.
2- Tsindrio "Skapa" hanombohana
2.1) Ity faritra ity dia maneho ny lisitry ny adiresy mailaka efa misy ao amin’ny kaonty mailaka fampiantranoana. Ny adiresy mailaka tsirairay dia tsy maintsy miavaka.
2.2) Tsindrio ny ‘Create’ hanombohana manangana adirey mailaka vaovao.
3- Manaova tsipiriany momba ny kaonty mailaka vaovao
3.1) Manorata anarana manokana ho an’ny adirey imailaka izay noforoninao. Amin’ny ankapobeny dia noforonina mba hampisaintsainana mailaka orinasa manokana leksak ny [mailaka voaaro] na amin’ny maha solontenan’ny orinasam-pandraharahana leksak ny [mailaka voaaro]
3.2) Ity ny sehatra nomena izay mifandray amin’ny mailaka hosting. Tsy mila manova zavatra eto ianao.
3.5) Eto dia azonao atao ny mametraka ny habaka fitehirizana izay tokony homena ny kaonty mailaka. Ohatrinona ny toerana apetrakao dia miankina amin’ny isan’ireo kaonty maro tokony hapetraka ary ny habaka azo ampiasaina. Tsarovy fa ny mailaka ankehitriny dia tonga miaraka amin’ny fanaka lehibe ary mihazakazaka eny amin’ny habakabaka mety hiteraka olana amin’ny fandraisana mailaka vaovao.
3.6) Raha tsy mamorona ity mailaka ity ianao dia tsindrio ity safidy ity mba handefa mailaka ho an’ny mpampiasa vaovao. Tadidio fa alefa any amin’ny kaonty izay noforoninao io mailaka io, ka mbola mila manome ny adiresy mailaka sy ny tenimiafina amin’ny mpampiasa mivantana avy amin’ny fomba hafa ianao. Ny mailaka fandraisana an-tsoratra dia mety hanampy amin’ny fizotran’ny dingana vaovao amin’ny mpiara-miasa vaovao.
3.7) Rehefa vita izany dia tsidiho ny bokotra ‘Skapa’ ary vita ianao!
1.2) Ny rindran-damba eo ankavanana dia hampiseho ny efijery voalaza. Tsindrio eo amin’ny ‘Skapa e-postadress’ hanombohana ny dingana fanoratana.
2.1) Mampidira adiresy mailaka tokana ato. Io anarana io dia tsy maintsy miavaka satria ny alàlan’ny mailaka dia tsy mamela ny anarana duplikat amin’ny sehatra iray ihany.
2.2) Jag har inga domäner izay hampiantranoana ny adirey mailaka. Raha manana anarana nomena tokana ianao dia tsy mila manova izany ianao. Raha manana mihoatra ny iray ianao, dia tsindrio ny lisitry ny sehatra azonao atao.
2.4) Raha tsikaritrao ianao na mbola tsy azonao antoka hoe inona no mahatonga ny tenimiafina matanjaka, dia ny fikitihana ‘Generera’ dia hanana rafitra ho anao. Aza adino ny manamarika izany.
2.5) Mampidira indray ny tenimiafina indray. Izany no fomba fiasan’ny rafitra hahazoana antoka fa mahatsiaro ny tenimiao marina ianao na mamela anao hanamarina izany raha toa ka misy typo iray natao.
2.6) Azonao atao ny misafidy ny hampiasa ny toerana fametrahana ny habaka momba ny sora-baventy na hamaritra ny fetra. Raha ny fanamarihan-drakitra, Plesk dia nanolotra ny habaka farafaharatsiny azo avela ho an’ity adiresy mailaka ity. Ny isa dia miova arakaraka ny ambaran’ny mailaka fampiantranoana mpamatsy.
2.7) Raha vao tafiditra daholo ireo saha ilaina, dia tsindrio ny ‘Done’ ary ny adiresy mailaka dia ho vonona. Raha tsy namorona ity mailaka ity ianao, tsarovy ny handefa ny antsipirian’ny angon-drakitra amin’ilay olona noforoninao ity kaonty mailaka ity.
Mail Exchange (MX) firaketana dia karazana firaketana DNS. Nasehon’izy ireo an-tsoratra ny toerana nandefasan’ny mailaka anao. Tsy leksak ny adiresy mailaka izay tsy maintsy noforonina isaky ny maniry vaovao ianao dia mila apetraka indray mandeha isaky ny sehatra iray.
Misy singa roa amin’ny rakitsoratra MX; Prioritet och destination.
laharam-pahamehana – Raha manana rakitra MX mihoatra ny iray ianao, ny laharam-pahamehana dia mamela anao hametraka izay nomena. Ny isa kely dia hanondro laharam-pahamehana kokoa. Ohatra, raha manana rakitra MX roa ianao ary ny iray dia napetraka amin’ny Prioritet 10 sy ny iray har 20, ny iray amin’ny Prioritet 10 dia homena laharana.
Destination – Ity no dikan-dikan-dikan-drakitry ny anaran’ny sehatra miasa. Amin’ny alalan’ny namana mahafinaritra dia midika izany fa tsy mety adirey IP izany, fa ny anarana mifandraika amin’io IP io.
1- Midira ny Zone Editor
2.2) Tsindrio ny ‘MX Record’ mba hanombohana ny fizotry ny fikirakirana ho an’ny MX Record vaovao.
3.1) Soraty eto ny laharam-pahamehan’ny MX Record. MX Ny laharam-pahamehan’ny MX dia miova matetika na atokana ho an’ny 5 na 10. Ohatra, raha manana rakitra MX ianao dia a Arizonao omena izany ho laharam-pahamehana 5.
3.2) Mampidira föredrar Destina. Ny mahazatra dia manamarika izany ho mail.yourdomain.com ka manondro fa rakitsoratra MX ho an’ny mpizara mailaka izany. Raha vantany vao vita ianao dia tsindrio ny ‘Lägg till en MX-post’.
1- Mankanesa alla amin’ny DNS-inställningar
1.1) Eo amin’ny zoron’ny fikandrana ankavia, kitiho eo amin’ny tranonkala sy sehatra. Eo amin’ny tontonana ankavanana, mandehana mankany amin’ny sehatra tianao te hamorona Record MX ho anao ary tsindrio ny ‘DNS Settings’.
3.2) Mampidira ny anaran’ilay sehatra tianao hamoronana ho an’ny mpizara mailaka. Ao amin’ny format mailserver.domainname.TLD
Prover av MX-poster
Prov – rakitsoratra MX an’ny WebHostingSecretRevealed.net.
Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny rakitra MX dia tsy maintsy manondro ny anaran’ny mpampiasa mailaka – fa tsy ny adirey IP. Ireto misy ohatra sasantsasany amin’ny MX Records marina;
En Rakitsoratry ny mpandefa politika (SPF) manondro inona ireo mpizara mailaka azon’izy ireo ampiasaina handefasana mailaka ny sehatra misy anao. Amin’ny ankapobeny dia voafaritra ao amin’ny DNS ao amin’ny kaontinao fampiantranoana tranonkala ary voatahiry ho TXT Records.
Ny SPF Spela in foana amin’ny ‘v =’ izay fampiasa SPF ampiasaina. Ny tena mahazatra dia ny ‘spf1’ ary ankatoavin’ny ankamaroan’ny olona amin’izao fotoana izao. Ny zava-drehetra manaraka ny ‘v =’ indikator dia ny fitipika izay mamaritra ny fampiantranoana na tsy navela hanisy mailaka avy amin’ny sehatra misy anao.
Ampianarina amin’ireo fitipika ireo ny fanovana;
Ary famaritana toy ny hoe:
Ary farany, manana ny kalandrie izahay izay manondro ny fomba handaminana lalao iray:
– för misslyckas
? för neutral
Exempel på SPF-poster
v = spf1 dia manondro ny version SPF
1.1) Mankanesa ao amin’ny cPanel ary tsindrio ny ‘Zone Editor’ mba hiditra ao amin’ny faritra fitantanana rakitsoratra.
2- Midira ny faritra fitantanana maharitra
2.1) Ao amin’ny Panel, ny huvudzon Zone Editor dia manome anao fotsiny ny fahafahana mamorona na manova karazana rakitra 3; A, CNAME ary MX. Mba hamoronana rakitsoratra TXT momba ny SPF Records dia mila tsindrio ny ‘Hantera’ ianao mba hiditra ao amin’ny faritra lehibe.
3.1) Eo amin’ny ilany ankavanan’ny efijery dia misy ny menio fanala izay ahafahanao misafidy ny karazan-tsoratra tianao hotratrarina. Afindrao ny lisitra ary tsindrio ny ‘Lägg till TXT Record’.
3.2) Eo ambanin’ny pejin’ny ‘Records’ dia ahafahanao miditra / mametraka ny famaritana ny rakitra SPF. Rehefa vita izany dia tsindrio ny ‘Lägg till post’.
1- Få åtkomst till DNS-inställningar
1.1) Ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso ny Plesk, tsindrio ny ‘tranonkala & ny sehatra ‘eo amin’ny lalana hidina ankavia. Eo amin’ny lafiny ankavanan’ny tontonana eo ankaviana amin’ny bokotra ‘DNS-inställningar’.
2.1) Indra mandeha amin’ny faritra DNS-inställningar dia tsindrio ny ‘Lägg till post’.
3,1. Avy ao amin’ny meny-dropdown, tsindrio ny karazan-tsoratra TXT.
3,2. Ampidiro eto ny famaritana SPF anao eto ary tsindrio ny ‘OK’. Vita ianao!
Maimaimpoana ve ny Gmail ho an’ny Business?
Ny Gmail för företag är ano anatin’ny G Suite och Google. Mampalahelo fa tsy maimaim-poana ny G Suite ary miara-miasa isam-bolana manomboka amin’ny $ 6 / mo / mpampiasa. Misy fe-potoana fanombohana fitapana maimaimpoana 14 andro.
Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra tranonkala dia manolotra fampiantranoana mailaka ary tonga leksak ny fenitra miaraka amin’ny fonosana fampiantranoana tranonkala. Ho solon’izay, azonao atao koa ny mandinika mividy anarana nomena anarana ary mampifangaro izany amin’ny serivisy mailaka toa an’i Gmail.
Iza amin’ireo mailaka maimaim-poana ingen tsara indrindra amin’ny raharaham-barotra?
Ho an’ny orinasa kely kokoa, Hostinger dia manolotra vidiny tsara Ho an’ny vola misy ambany amboniny, manomboka amin’ny $ 0,99 / mo.
Ny fananganana kaonty mailaka dia matetika atao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso fampiantranoana anao. Amin’ny ankapobeny, ny fametrahana kaonty mailaka dia tsotra leksak ny famoronana anarana ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso mailaka, avy eo ny fametrahana fetra amin’ny haben’ny kaonty.
Ny safidinao mpamatsy dia afaka manampy be dia be amin’ny zavatra rehetra tokony hataonao amin’ny kaonty fampiantranoana anao. izay soso-kevitra am-pitiavana amin’ny ampahany noho ny rakitsorany tsara. Ny fiasana amin’ny fampiantranoana azo antoka dia mety hampihena ny haavon’ny haavon’ny tenanao, ka valio amim-pahendrena ny mpampiantrano anao.
För lekmannen är e-post vanligtvis associerad med stora leverantörer som Google eller Yahoo eftersom
Ho an’ny mpandainga, ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe mainan ny Google
Ho an’ny mpandainga、ny mailaka dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe toy ny Google na
Articole Promovate 0
Piedāvātie raksti 0
Ho an’ny mpandainga, ny maila dia matetika mifandray amin’ireo mpamatsy lehibe toy ny Google
10-remedii de Trovado de Senpaga Skribta Laboro
Hoe problemen met PHP-geheugenlimiet in WordPress op te lossen
15 obligāti zināmi spraudņi ārštata rakstniekiem
Схабакадда угу Фиицан ее Ганацсига иариар (2020)
Cara Nulis Skelbimo dienoraštis Pinunjul Nalika Donya Ngeculke Loose (Anglų kalba Luar Sampeyan)
Kaip internetiniai dienoraščiai kelia jums pavojų (ir kaip apsaugoti jūsų privatumą)